I-IMOBA entsha ka-2022 yokukhuphela i-Apk ye-Android [ML Injector]-Luso Gamer
Imidlalo ye-MOBA iyadlalwa kwaye iyathandwa kwihlabathi liphela. Nangona siqinisekile ukuba uninzi lwabadlali bomdlalo weMLBB bafuna indlela eyiyo yokutofa iihacks ezahlukeneyo. Yiyo loo nto sithathela ingqalelo umdla wabadlali kunye nendlela ekhuselekileyo yokutofa apha sizise i-IMOBA entsha ka-2022.
Enyanisweni, oku Injector icwangcisiwe ijolise kubadlali beLegend Bang Bang. Injongo yokwakhiwa kwe-app kukubonelela ngendlela ekhuselekileyo. Apho ukuvalwa kunye nezinye iingxaki zokubona zisuswa ngokusisigxina.
Nangona ngezantsi apha siza kuchaza onke amanyathelo aphambili kubandakanya inkqubo yokufaka kunye nokusetyenziswa kwesicelo. Nangona kunjalo siza kuchaza amanye amaqhinga abalulekileyo okuthintela ingxaki yokuvalwa. Ukuba uzimisele ukonwabela iimpawu zesixhobo emva koko ukhuphele i-IMOBA eNtsha iCandelo lama-54.
Yintoni entsha IMOBA 2022 Apk
I-IMOBA 2022 entsha sisixhobo se-MLBB senkxaso se-intanethi esenziwe ngabaphuhlisi abangaziwayo. Siyabazi abaphuhlisi kunye nabantu abasemva koku kufunyanwa okukhulu. Nangona kunjalo akuyi kufaneleka ukuxela igama lakhe ngaphandle kwemvume.
Ukuba sijonga kwiinkcukacha ezibandakanya iinkxalabo eziphambili eziboniswe ngabadlali. Sifumene uninzi lweengxaki eziphambili ezahlukeneyo ezinokufunyanwa ngabadlali ngelixa besebenzisa. Ingxaki yokuqala kunye nengundoqo yokusebenzisa izixhobo ezinjalo zomntu wesithathu kukuvinjelwa okusisigxina.
Isizathu sokuthatha uncedo kwimithombo yomntu wesithathu kungenxa yokhuphiswano olunamandla. Ngaphezu koko, uninzi lwezixhobo zokusebenza ezibandakanya izikhumba kunye neziphumo zibekwe kudidi lweprimiyamu. Oko kuthetha ukuba ngaphandle kokutyala imali yokwenene, akunakwenzeka ukufumana ezo zinto.
Iindleko zokwenene zokufumana ezo zinto zinokugqitha kumakhulu eedola. Nabadlali bayaphambana malunga nezi zikhumba zeKrisimesi kunye neziphumo. Ke ukhangela umntu wesithathu okwi-intanethi oxhaswa ngumthombo we-android. Emva koko sincoma abo bafake i-IMOBA eNtsha ye-54 ye-Android.
igama IMOBA 2022 entsha
ubungakanani 10.7 MB
Igama lepakheji com.mlbb.imoba
Ukuba sijonga kwiinkcukacha eziphambili kubandakanywa izixhobo ezinokufikeleleka ukutofa. Ezo mpawu pro ziquka Zonke Skins, Drone View, Zonke Effects kunye Menu More etc. Siyalibala ukukhankanya ngale nkqubo enkulu Anti-Ban efikelelekayo.
Ngaphambili sixoxe ngabadlali abaninzi ababonisa le nkxalabo enkulu malunga nengxaki yokuvalwa. Iiprothokholi zokhuseleko zeseva yokudlala zihlaziywa rhoqo. Oku kuthetha ukuba iiseva ziphumelele ekubhaqeni umsebenzi ongekho mthethweni.
Ke abo banikwa ukhetho olupheleleyo lokudwelisa iakhawunti yokudlala kunye nesixhobo phakathi kwezixhobo ezifakwe kuluhlu olumnyama. Ukuba isixhobo sivaliwe kube kanye, ngoko akunakwenzeka ukuhlehlisa inkqubo. Ngoku ukunika amandla i-Anti-Ban kunye ne-Anti Cheat iyakususa yonke loo miqobo.
Olona kongeza luchulumancisayo zizikhumba zeKrisimesi. Abo nguClaude, Eudora, Freya, Karina, Lancelot, Fanny, Gord, Zilong, Odette, Miya kunye noHlaziyo lweHero Karrie njl.
Ukwenza oko, abadlali bayacelwa ukuba bakhuphele uguqulelo lwamva nje lwe-IMOBA eNtsha iNdawo ye-54 ML ukusuka apha. Ngoku faka usetyenziso oluthile ngaphakathi kwe-smartphone ye-android. Kwaye ngokukhuselekileyo ufakele infinite premium Izikhumba kunye neziphumo kuquka ingqokelela yeKrisimesi simahla.
Isixhobo se-app sikhululekile ukukhuphela.
Ukufakela isixhobo kunika ingqokelela engapheliyo yezinto zepro.
Ezo ziquka izikhumba, iziphumo, iDrone View kunye neMenu engaphezulu.
I-Ant-Ban kunye ne-Anti-Cheat nazo ziyafikeleleka.
Akukho ntengiso ngqo zivumelekileyo.
Ijelo elikhuselekileyo libonelelwe ngokutofa.
Akukho rhumo luphambili luyafuneka.
Ujongano lwesixhobo lugcinwe lula.
Uyikhuphela njani i-IMOBA entsha ka-2022
Xa kuziwa ekukhupheleni inguqulelo yamva nje yeefayile ze-Apk. Abasebenzisi be-android banokuthembela kwiwebhusayithi yethu, kuba apha kwiwebhusayithi yethu sinika iifayile ezithembekileyo kuphela. Ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi baya konwatyiswa ngemveliso elungileyo.
Siqeshe iqela leengcaphephe eliquka iingcali ezahlukeneyo. Ngaphandle kokuba iqela liqinisekile malunga nokusebenza kakuhle kwefayile ye-Apk. Asikhe sinikeze i-Apk ngaphakathi kwecandelo lokukhuphela kubadlali be-android. Ukukhuphela uguqulelo lwamva nje lwe-IMOBA Injector nceda ucofe kwikhonkco elinikiweyo elingezantsi.
Nangona singaqinisekanga ngenkqubo kodwa ukuthatha uncedo lwezixhobo zeqela lesithathu ngaphakathi komdlalo akukho mthethweni. Ukuza kuthi ga ngoku izigidi zeeakhawunti zemidlalo zivaliwe. Nangona kunjalo abaphuhlisi bafakela imilinganiselo yokhuseleko eyahlukeneyo, bafake kwaye bafake iimpawu zepro ngomngcipheko wakho.
Ukuza kuthi ga ngoku uninzi lwezinye izixhobo zokutofa zeML zipapashwa apha kwiwebhusayithi yethu. Ukujonga ezo zixhobo zihambelanayo nceda ulandele amakhonkco. Ezizi MEOW IMLS Apk kwaye IPapskie Injector Apk.
Ungumlandeli omkhulu weLegend Bang Bang, kodwa awukwazi ukuqhubela phambili ngenxa yezixhobo ezinqongopheleyo kunye nokunqongophala kwezakhono. Ungabi naxhala kuba apha sizise esi sisombululo sikhulu. Ngoku ukufaka i-IMOBA entsha ka-2022 yokuKhuphela kuya kunceda ukutofa izikhumba zasimahla kunye neziphumo ngaphakathi komdlalo.
iindidi izixhobo, apps tags IMOBA 2022 entsha, Entsha IMOBA 2022 Apk, Entsha IIMOBA 2022 Khuphela, I-IMOBA Entsha Icandelo 54 ML Post yokukhangela
Ngaba kusemthethweni ukukhuphela iBulli Bai Apk? [Iidili zikaSulli]